Cancelled orders | foodpanda riders MM
Cancel ဖြစ်သည့် အော်ဒါအား
ကုန်ခြောက်ပစ္စည်း၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ -foodpanda Shops, g&g, abc, Capital Shops၊ pandamart အစရှိသော ဆိုင်များမှ) မှာယူသည့်အော်ဒါများ မမျှော်လင့်ဘဲ Cancel ဖြစ်ပွားပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ဆိုင်နေရာသို့ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး
ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။
ဆိုင်သို့ သတ်မှတ်ထားချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားသည့် ၁ ကီလိုမီတာနှင့်အထက် အကွာအဝေးရှိသော Cancel ဖြစ်သည့် အော်ဒါများအတွက်လည်း Panda Rider များအနေဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
​သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဆိုင်သိုပြန်လည်အပ်နှံခြင်းမရှိသော အော်ဒါများအနေဖြင့် အော်ဒါ၏ကျသင့်ငွေပမာဏအတိုင်း Panda Rider တို့ရဲ့ Wallet အတွင်း ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး foodpanda biller အကောင့်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည့်ငွေပမာဏအဖြစ် မှတ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Cancel ဖြစ်သွားသည့်အော်ဒါအား သက်ဆိုင်ရာဆိုင်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရသည့်အတွက် ဝန်ဆောင်ခရရှိမှာလား?
ဆိုင်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း ၁ ကီလိုမီတာနှင့်အထက်အော်ဒါများအား လုပ်ဆောင်ရမည့်လမ်းညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဆိုင်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားပြီးပါက ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခရရှိပါမည်။
ဆိုင်ရှင်/ ဝန်ထမ်းအား ''မင်္ဂလာပါ ... foodpanda ကပါ။ အော်ဒါ Cancel ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဆိုင်သို့လာရောက်ပြန်လည်အပ်နှံတာဖြစ်ပါတယ်'' ဟုပြောပြပါ။ ပြီးလျှင် ဆိုင်သို့ပြန်လည်အပ်နှံပြီးကြောင်း သက်သေအဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး ကြီးကြပ်ရေးမှူး (နားကြပ်) ထံ အကြောင်းကြားပါ။
အော်ဒါ Cancel ဖြစ်ပါက ဆိုင်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် အချိန်မည်မျှရရှိပါသလဲ?
ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရမည့် အကွာအဝေးအလိုက် လုံလောက်သည့်အချိန်တစ်ခုရရှိပါသည်။ သို့သော် Cancel ဖြစ်သည်ဟုသိရှိပါက လုပ်ဆောင်ရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် သေချာပါစေ။